I-Grand Bargain - Iinkcukacha kunye Nenkcazo
Inkcazo yesivumelwano esingenzeka phakathi koMongameli kunye neCongress
Ixesha eliqhelekileyo lithengiswa ukuchaza isivumelwano esinokubakho phakathi kukaMongameli uBarack Obama kunye neenkokheli zenkampani ekupheleni konyaka ka-2012 malunga nokunciphisa imali kunye nokunciphisa ityala likazwelonke ngelixa ukuphepha ukuchithwa kwemali ngokuzenzekelayo ngokuchanekileyo okubizwa ngokuba yi- sequestration okanye i-cliff yezimali ezibekwe ukuba zenzeke ezi zilandelayo unyaka kwezinye iinkqubo ezibalulekileyo eMelika.
Iingcamango zentlanzi enkulu yayivela ukususela ngo-2011 kodwa okwenzeka ngokwenene kwavela emva kokhetho lonyulo luka-2012, apho abavoti babuyela khona abaninzi kwiinkokheli ezifanayo eWashington, kubandakanya u-Obama kunye nabanye abagxeki bakhe abanobuhlungu kwiCongress .
Inkathazo ekhoyo ekhoyo kunye neNdlu ephakanyisiweyo kunye neSenate inikeze umdlalo ophezulu kwiiveki zokugqibela zika-2012 njengabagqwetha umthetho basebenza ukuze baphephe ukutywa kwe-sequestration.
Iinkcukacha ze-Grand Bargain
Ixesha elibi kakhulu liye lasetyenziswa ngenxa yokuba yayiza kuba ngumgaqo-bipartisan phakathi komongameli weDemokhrasi kunye neenkokheli zeRiphablikhi kwiNdlu yabameli , abaye banqanyulwa kwiziphakamiso zomgaqo-nkqubo ngethuba lokuqala kwiNdlu eNtshonalanga.
Phakathi kwezinye iinkqubo ezinokujoliswa ekucutshulweni okukhulu kwiinkqubo ezinkulu ezibizwa ngokuba yimfanelo : I- Medicare , iMedicaid kunye noKhuselo loLuntu . Iidemokhrasi ezichasene nezicucu ezinjalo ziyavuma ukuba iiRiphabhlikhi, ngokuphindaphindiweyo, zisayinwe kwiirhafu eziphezulu kumaxabiso athile abafumana umvuzo abaphezulu abafana noMthetho weBuffett.
Imbali ye-Grand Bargain
Inzuzo enkulu ekunciphiseni kwamatyala kuqala kuvela kwixesha lokuqala lika-Obama kwi-White House.
Kodwa iingxoxo malunga neenkcukacha zolu cwangciso zichazwe ehlobo le-2011 kwaye azizange ziqale ngokunyanisekileyo de emva ko-2012 kunyulwa koongameli.
Ukungavumelani kwindibano yokuqala yokuxoxisana kubikwa ukuba kwakunyanzeliswa ngu-Obama kunye namaDemokhrasi kwinqanaba elithile lemali yengeniso entsha.
AmaRiphabhulikhi, ngokukodwa amalungu angama-Congress, atyholwa ngokukrakra ukukhupha irhafu ngaphaya kwexabiso elithile, kuthiwa ixabiso lemali engenayo eyi-$ 800 yezigidi.
Kodwa emva kokukhethwa kuka-Obama, iNdlu uSomlomo uJohn Boehner wase-Ohio yabonakala ukubonakalisa ukuzimisela ukwamukela irhafu ephezulu ngokubuyisela ukucutshungulwa kwenkqubo. "Ukuze kunikwe inkxaso yeRiphablikhi inkxaso yokufumana imali entsha, uMongameli kufuneka azimisele ukunciphisa imali yokuchitha imali kunye nokunyusa iiprogram zokufaneleka eziphambili zetyala lethu," kusho uBoehner etshele intatheli emva kokhetho. "Sondele ngakumbi kunokuba nabani na ocinga ukuba ubunzima obunzima bufunekayo ngokomthetho ukuze kwenziwe ukulungiswa kwentlawulo."
Ukuchaswa kwi-Grand Bargain
Abaninzi bamaDemokhrasi kunye neenkululeko bavakalisa ukungaqiniseki malunga nokunikezwa kukaBoehner, baze baphinde baphikisa ukuchaswa kwabo kwi-Medicare, Medicaid kunye noKhuselo loLuntu. Bathetha ukuba ukunqoba kuka-Obama ngokuzimisela kwamvumela igunya elithile lokugcina iinkqubo zentlalo kunye neendlela zokukhusela. Baye bathi ukutyunjwa ngokubambisana nokuphela kokubanjwa kweentlawulo zerhafu kunye ne-tax-tax cuts ngo-2013 kunokubuyisela ilizwe elizweni.
Uqoqosho lwe-liberal u-Paul Krugman, ukubhala kwi-New York Times, wathi u-Obama akafanele amkele i-republican offer of new mergain:
"UMongameli Obama kufuneka enze isigqibo, ngokukhawuleza, malunga nendlela yokujongana nokukhuseleka kweRiphabhliki." Kufuneka ahambe kangakanani ekuhambeni iimfuno ze-GOP? Impendulo yam, ayikho nhlobo. ukulungele, ukuba kunyanzelekile, ukubamba umgangatho wakhe kwindleko yokuvumela abachasi bakhe ukuba babonakalise umonakalo kwizoqoqosho ezizinzileyo. Ngokuqinisekileyo akusikho ixesha lokuxoxisana 'neentengo ezinkulu' kwibhajethi ehlutha ukutshatyalaliswa kwimihlathi yokunqoba . "
I-Tale of Despereaux nguKate DiCamillo
Iingoma zeMculo zoMculo zezingane